တောင်ကြီးမြို့အလှ၏ ရှု့ခင်းတနေရာ… | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Environment » တောင်ကြီးမြို့အလှ၏ ရှု့ခင်းတနေရာ…	5
Posted by me dain on Jul 1, 2012 in Environment |5comments
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ရပ်ကွက်ပြည်သူများ ကို ခြိမ်းခြောက်
နေသော ကမ္ဘာဖလား ဖယောင်းစက်၏ ကာဗွန်ငွေ့…
me dain has written5post in this blog.
View all posts by me dain →	Blog
ရဲစည် says: အမလေး အဲလိုသာဆို
ဒို့ မီးသဂြိုလ် စက်က တနေ့ တနေ့ ထွက်နေတဲ့ မီးခိုး သဘာဝပတ်ဝင်းကျင်ကို ထိခိုက်နေတာ ဘယ်လိုလုပ်ရပ….. :D
Ko out of... says: ကိုရဲစည် အခုလိုပြောတော့ ကျွန်တော်ပြန်လည်ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးဗျာ..ကျွန်တော့်ကို သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က သူဓါတ်ပုံ မတင်တတ်လို့ဆိုပြီး ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တာ..သူကတော့ အဲဒီရပ်ကွက်မှာနေတယ်…
သူငယ်ချင်းပြောပုံ အရဆိုရင်တော့.. အဲဒီဖယာင်းစက်က လူနေရပ်ကွက်ထဲမှာလို့ပြောတယ်…
အရင်ရပ်ကွက် မတိုးချဲ့ခင်တုံးက ဘာမှ မဖြစ်ပေမဲ့ အခုက လူနေရပ်ကွက် အဖြစ်သတ်မှတ်
လိုက်ပြီဆိုတော့ ရပ်ကွက်ကလူတွေက ဘယ်သူ့ကိုတိုင်ရမှန်းမသိဘူး ဖြစ်နေတယ်..
တိုင်ကြားထားတာတော့ရှိတယ်..ဒါပေမဲ့ ရပ်ကွက်လူကြီးနဲ့ ဘယ်လိုပေါင်းထားလည်းတော့
မသိဘူး စက်ရုံပြန်လည်ပတ်နေပြီလို့ပြောတယ်.. အဲဒီဖယောင်းစက်ရုံက ထွက်တဲ့
အနှံ့ဆိုးနဲ့ စက်ရုံရဲ့ ကုန်ကြမ်းဖြစ်တဲ့ ဖယောင်းကြမ်းတွေကိုလည်း သိုလှောင်ထားတော့ မီးဘေး
လည်းစိုးရိမ်ရတယ်..ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးလည်း စိုးရိမ်ရတယ်လို့ပြောတယ်..
အဲဒီဘေးအိမ်က အဖွားကြီး တစ်ယောက်ဆို ရင်ကြပ်ရောဂါနဲ့ သေသွားတယ် လို့ပြောတယ်
…နောက် သူငယ်ချင်းပြောတာကတော့ အေးသာယာ စက်မှုဇုံမှာလည်း
စက်ရုံရှိတယ် မပြောင်းရွှေ့ဘဲ ဆက်လှည်ပတ်နေတယ်..
သူကတော့ ဒီစက်ရုံ ပြောင့်ရွှေပေးဖို့ ဆက်လှုပ်ရှားမယ် လို့ပြောတယ်..တခါက ဘယ်သူလဲတော့ မသိဘူးတဲ့..
talk2DVB ကိုတင်ပေးတော့ တခါ လားလွင့်ပေးလိုက်တယ်တဲ့..ခဏလေးတော့ စက်ရုံနားတယ် ဆိုလား?နောက် မီးခိုးသိပ် မထွက်တဲ့ ခေါက်ဆွဲ လုပ်ငန်းကို ပြောင်း လုပ်မလားဆိုဘဲ…လို့ပြောပြီး အခုတော့ စက်ရုံကထွက်တဲ့ မီးခိုးက အရင်လို ပြန်ဖြစ်နေပြီ
အခုလို ဒီပိုစ့်မှာ ဖေါ်ပြရတာလည်း သူများစီးပွါးရေးကို ပျက်းစီးစေလိုတဲ့ စိတ်မရှိပါဘူး..သူတို့နားလည်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ ..
ကိုယ်က လည်းသာမန် ပြည်သူတစ်ယောက် ၊သူကလည်းသာမန် ပြည်သူတစ်ယောက် ဆိုတော့ ဘာမှ လုပ်ရှားလို့မရလို့ ဒီအင်တာနက်
ကွန်ယှက်ကနေတဆင့် အထက်လူကြီးတွေ သိအောင် ကူညီပေးရတာပါ… ဒို့ရွှာသားများလည်း ဒီလိုမတရား သဖြင်. ဘယ်သူဘာ ဖြစ်ဖြစ် ငါမဖြစ်ရင်ပြီးတာဘဲ ဆိုတဲ့
လူတန်းစားတွေ လွမ်းမိုးမှု ကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ ဆက်လက် ကူညီပေးလိုက်ကြပါဗျာ…
mamanoyar says: ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး
snow white says: ဘာလည်းဟင်မသိဘူး ပုံကသေချာမမြင်လိုက်ရဘူး ။။။။ ကြိုးစား နော်တို့လည်းလူသစ်တစ်ယောက်ဘဲအားမငယ်နဲ့နောက်တော့ပုံတင်တက်သွားမယ်။။။။
Yin Nyine Nway says: ကမ္ဘာဖလား ဖယောင်းစက်
ဒါနဲ့ ဒူတို့က စက်မှုစုံ ပြောင်းဘူးလား
Comments By Postနာဂစ်၏ လက်ဆောင်မွန် - အလင်း ဆက်သန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - အလင်း ဆက် - Mလုလင်Congress - padonmar - ရာမညတံတွေးစွပ်ခဲ့ပါ နိုင်းနိုင်းစနေ - Foreign Resident - Nan Shinသစ်ပင်တစ်ပင်၏ကျဆုံးခန်း...Kathit Tree.. - Foreign Resident - uncle gyiဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - Foreign Resident - padonmarဆြာအုပ်ကလိထားတဲ့ HDR - Foreign Resident - padonmarကွက်လပ်ဖြည့်စိတ်ဓါတ် - padonmarစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - padonmar - padonmarပေါင်းစု - padonmar - မဟာရာဇာ အံစာတုံးစိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - padonmar - padonmarလူဝကြီးနှင့် လူပိန်ကြီး - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - လင်းဇော် ထက်ကိုပေါက်(မန်းလေး)၊ ဆြာအုပ်၊ Mလုလင်3in 1 - (ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲ) - Mလုလင် - padonmarဒေဝေါ ဆိုသည်မှာ - padonmar - KZဖိုင်နယ်မှာ အပိုင်တွယ်မှာက - Myo Thant - သခင် mobileသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - အလင်း ဆက်“၀လုံးရေးဖို့ ညီလေးထိုင်” - nicolus agral - uncle gyiဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - Foreign Resident - ကြက်အူလှည့်အိုဘယ့် ...ခရီးသည် - မောင် ပေ - အလင်း ဆက်“ရှေးရှေးက ဆင်ဖြူရှင်မနန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးကောင်းမှူ့ အခုမှာတော့ကျောင်းအိုအို” - Mr. MarGa - ko pauk mandalayခရီးသည်လေးသို့ - အလင်း ဆက် - လင်းဇော် ထက်မန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - အလင်း ဆက် - မဟာရာဇာ အံစာတုံးစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - Foreign Resident - မဟာရာဇာ အံစာတုံးFloral Gift - Macro Series - ကိုရင်စည်သူ - Mr. MarGaWhat are some of the unique features of e-commerce technology? - ကိုရင်စည်သူလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - နွေဦးကောင်းတာလည်း ရှိတယ်။ .......ဆိုးတာလည်းရှိတယ်။ - Mr. MarGa - padonmarEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities